Bakhumbule indodana yabo ngokunikelela abampofu | News24
Bakhumbule indodana yabo ngokunikelela abampofu
ISITHOMBE:sithunyelwe Umndeni wakwaMadlala endaweni yaNgaphezulu ugubhe usuku lokuzalwa lwendodana yawo engasekho nabantwana abahlwempu bakulendawo ngempelasonto esiphuma kuyona.
UMNDENI wakwa Madlala endaweni e-Elandskop ukhumbule izenzo zobuqhawe bendodana yawo engasekho ngokugubha usuku lwayo lokuzalwa nabantwana abampofu bakule ndawo ngempelasonto esiphuma kuyona.
USwelihle Mchunu udlule emhlabeni ngoNhlolanja walo nyaka emva kokubanda kanyeka engozini yemoto enyantisayo. Umalume kamufi uMnu Thokozani Madlala utshele iphepha ndaba i-Echo ukuthi bakhethe ukugubha lolu suku nabantwana abangu 22 abahlwempu bakule ndawo njengoba naye umufi ebezohlanganisa iminyaka engu-22 kule nyanga.
Uthe ukushona kwakhe yize kuwuhlukumezile umndeni, kuphinde kwaba isibusiso njengoba abazala bamufi bekhethe ukuhlangana basungule isikhwama sokusiza abampofu esizokwaziwa nge-Iswelihle Isiphesihle Foundation(Non Profit Company) Uqhube ngokuthi njengoba umufi ayengumuntu onothando lwabantu futhi enothando lokusiza lapho kudingeka khona, bakhethe ukumkhumbula ngale ndlela ukuze bagcine umlando wakhe. Uthe lo mcimbi uzokwenziwa minyaka yonke njalo ngo Lwezi njengoba azalwa ngomhlaka 1 kule nyanga. Phezu kokugubha usuku nalo mndeni labantwana baphinde baphiwa izipho zikaKhisimusi okubalwa kuzo izinto zokugcoba nokudla. UMadlala uphinde wagcizelela ukuthi inhloso enkulu yokusungula lesikhwama ukuthi bakwazi ukuqoqa iminikelo ukuze bakwazi ukunikelela leyo mindeni ebhekene nobubha endaweni.
“Lesi sifisa kube isikhwama esiyoba ngumlando kwizizukulwane ngezizukulwane ukuthi kukhona umuntu onjengoSwelihle esake saphila naye. Asinikeli ngoba sinemali, kodwa siyakholelwa ukuthi kokuncane esinakho, singakwazi ukulula isandla ukuze kusizakale nabanye abantu.
“Lokhu futhi kuyinselelo kunoma ubani ongakwazi ukusiza ukuthi singahlali phansi silinde yonke into kuhulumeni. Ngokuncane esinakho, singasiza isizwe. Kusondela isikhathi sikaKhisimusi okuyisikhathi sokuphana, siphonsa inselelo kuloyo naloyo ongalula isandla ukuze senze impilo ibe ngcono,” kuphetha uMadlala.